Naya Drishti | दिल्ली जानू अघि झलनाथले निकालेको वक्तव्यले माधव समुहमा भुइचालो, आधिकारिकतामै आशंका - Naya Drishti दिल्ली जानू अघि झलनाथले निकालेको वक्तव्यले माधव समुहमा भुइचालो, आधिकारिकतामै आशंका - Naya Drishti
असार ०२, काठमाडौं । नेकपा एमालेका पूर्व अध्यक्ष झलनाथ खनालले थप उपचारका लागि दिल्ली प्रस्थान गर्नुअघि जारी गरेको वक्तव्यलाई लिएर माधव नेपाल-झलनाथ खनाल समूहमा भुइचालो आएको छ । उक्त समुहका नेताहरुले हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको भनेपछि तरंग उत्पन्न भएको हो ।
खनालले बुधबार दिल्ली प्रस्थान गर्नुअघि जारी गरेको वक्तव्यमा धैर्य र संयमका साथ पार्टी एकता जोगाउन प्रयत्न गरे सफल हुने भन्दै विभाजनको विपक्षमा उभिन पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गरेका थिए ।
विज्ञप्तिमार्फत नेता खनालले सबैले रीस, राग, अहंकार र बदलाको भाव त्यागेर एमाले एकताका लागि भूमिका खेल्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए । तर खनालको सो वक्तव्य उनी स्वयंको विचारविरुद्ध आएको भन्दै नेताहरू जगन्नाथ खतिवडा, डा. विजय पौडेल लगायतका नेताले विरामी नेताको नाममा हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेर वक्तव्य निकालिएको बताएका छन् ।
नेपाल-खनाल पक्षका २ जना केन्द्रीय नेताहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत सो विज्ञप्तिको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठाएका छन् ।
एमाले नेता डा. विजय पौडेलले ट्वीटमार्फत खनालको नाममा अरुले नै वक्तव्य जारी गराएको आरोप लगाएका छन् । ‘झलनाथ कमरेडको नाममा आफ्नो वक्तव्य निकालेछन्, यस्तो फटाइ नगरेको वेश’, पौडेलको ट्वीट छ ।
त्यस्तै अर्का एमाले नेता जगन्नाथ खतिवडाले फेसबुकमार्फत नेता खनालको नाममा हस्ताक्षर दुरुपयोग गरि वक्तव्य जारी भएको आरोप लगाएका छन् । विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको विचार खनालको विचारसँग मेल नखाने भन्दै खतिवडाले खनालको वक्तव्यका नाममा चालबाजी भएको बताएका छन् ।
‘श्वासप्रश्वासमा समेत गार्‍हो भइरहेको अवस्थामा झलनाथ खनालले यस्तो वक्तव्य लेख्ने कल्पना गर्न सकिँदैन । वक्तव्यमा उल्लेखित विचार क. झलनाथ खनालको विचारसँग मेल खादैन । उहाँ प्लेन चढिसकेपछि यो वक्तव्य आउनु आफैंमा रहस्यमय छ’ खतिवडाले भनेका छन् । नेता खनालको बिरामी अवस्थालाई राजनीतिक स्वार्थको घैटौ भर्न प्रयोग नगर्न समेत खतिवडाले आग्रह गरेका छन् ।
तर खनालको नाममा जारी भएको वक्तव्य भने उनकै नाममा आधिकारी फेसबुक अकाउण्टबाट आज सार्वजनिक भएको थियो ।
यस बिषयमा खनाल नर्भिक अस्पतालबाट त्रिभुवन विमानस्थलतर्फ जानुअघिसम्म उनीसँगै रहेका एमाले नेता तथा निकट सहयोगी होम बुढाथोकीले भने पार्टी एकताबारे खनालले जारी गरेको विज्ञप्ति ‘एक लाख प्रतिशत आधिकारीक’ भएको दावी गरेका छन् ।
एमाले केन्द्रीय लेखा आयोगका सदस्य समेत रहेका बुढाथोकी परिवारका सदस्यसँगै अस्पतालमा थिए । खनालको हस्ताक्षरमा उनकै आधिकारिक फेसबुक पेजबाट जारी भएको विज्ञप्तिबारे कुनै आशंका नरहेको भन्दै बुढाथोकीले विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्दा पनि आफू सँगै रहेको बताए ।
विज्ञप्तिको बास्तविकता :
खनालको आधिकारिक पेजबाट एकताको पक्षमा विज्ञप्ति आउनुअघि नै उनले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग फोनमा र महासचिव ईश्वर पोखरेललाई अस्पतालमै पुगेका बेला पार्टी मिलाउन आग्रह गरेको समाचार आइसकेका थिए ।
खनालको सचिवालय स्रोतका अनुसार उनले आफू उपचारका लागि दिल्ली जानुअघि एकताको पक्षमा अपिल गर्ने इच्छा देखाए । विज्ञप्ति मस्यौदा गर्ने जिम्मा उनले नेता भीम आचार्यलाई दिएका थिए ।
आचार्यले मस्यौदा गरेका विज्ञप्तिमा केही शव्द उनले थपघट गरेपछि स्वकीय सचिव कृष्ण भट्टराईले छाप लगाएका थिए । खनालको हात कामेर हस्ताक्षर गर्न गाह्रो भएपछि आधिकारिक हस्ताक्षरको छपा लगाइएको थियो ।
भीम आचार्य पछिल्लो समय पार्टी एकताको पक्षमा सक्रिय छन् । प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीसँग भेटपछि उनले दोस्रो तहका नेताहरुसँग वार्तामा सहभागिता जनाइरहेका छन् ।
प्रदेश १ को सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने सन्दर्भमा पनि आचार्यले मुख्यमन्त्री शेरधन राईसँग वार्तापछि सरकारलाई सघाएको भन्दै नेपाल पक्षका केही नेताले आशंकाको नजरले हेरेका छन् ।